IC amakhadi inkumbulo flash BlackBerry 9790 Bold — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
IC amakhadi inkumbulo flash BlackBerry 9790 Bold
— factory original yememori khadi ngamandla flash chip, inkinobho yokuvala futhi i-microphone ozikhethela.
Chip flash khadi, inkinobho yokuvala futhi i-microphone olwengeziwe for BlackBerry 9790 Bold.
PCB-33053-005 Idivayisi kuhlanganisa:
inkinobho smartphone Lock
Microphone ozikhethela (uqopha ividiyo, audio)
Isikhala sememori khadi — yeqoqo smartphone ukuxhuma Secure Digital microSD imemori khadi standard (ebibizwa TransFlash). BlackBerry 9790 bangasebenza khadi up to 64 GB (phawula lemali khadi asekelwa BlackBerry incike version of the — yesistimu yokusebenza "Kungenza ngiqabuleke"!). BlackBerry 9790 Bold ukwesekwa high-speed SDHC Class 1-10 izindlela kanye SDXC UHS-1.
Uma umonakalo ngeke itholwe Isikhala sememori khadi, okuyinto iyehlisa ingakanani imemori ekhona yokugcina. Kulokhu, ufuna ukuba esikhundleni Isikhala sememori khadi (lokhu model chip 9790): Ukuze bavale isikhala salo slot imemori khadi.
Flash — ishayela fotoosvetitel, IFO — umthombo wokukhanya odala a short-term high-ngegalelo ukukhanyisa. Isetshenziselwa isithombe bese video ngokudubula at BlackBerry 9790 Bold ezimweni aphansi ekukhanyeni. Ngesikhathi kokugqashuka chip ephukile futhi idinga ukushintshwa.
Microphone kule chip akulona main kanye ezengeziwe. It ukhonza ukwenza ngcono ikhwalithi vidio zokuqopha audio (ngezwi rekhoda). Lolu phiko is hhayi ushintshwa ngomunye kalula ngabanye ngenxa yobukhulu balo encane, kodwa on BlackBerry 9790 efakwe kule "umzali" element, okuyinto lula ukukhanda. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana lilungisa umbhobho ukufunda ikhasi Ukukhipha i-microphone.
A isixazululo omuhle ungalikhanyisa ngamandla leli ehlukile chip lock inkinobho — yenza lula kakhulu ukukhanda uma kwenzeka izinkinga ahlobene.
Chip 9790MCSLOT-IA (PCB-33053-005) — original ingxenye yomzimba: efanayo ekuqaleni ngesikhathi umhlangano efektri.
IC amakhadi inkumbulo flash BlackBerry 9790 Bold, Ngaphandle umbala 9790MCSLOT-IA (PCB-33053-005) ●